Dzvinyiriro yemvura inogadzirisa → Inoita sei? • Kuchenesa? • Nzira yekuisa?
Kudzvinyirirwa kwemvura kuderedza, mutemo pamwe nefirita uye kudzvinyirira geji. Kudzvinyirira kunochinja mvura kunoitika mugadziriro yemvura kazhinji kunoguma, pakati pevamwe, kubva kune isina kugadzirwa mvura mvura system kana kuitika usiku, kana kushomeka kwemvura kwakawanda kunowedzera kuwedzera kumanikidzwa kwayo mumapaipi, inogona kukuvadza system uye zvishandiso zvakabatana nazvo, uye kuendesa mushandisi kumitengo isiriyo.
Kuisa iyo inodzvinyirira yemvura ichaderedza kumanikidzwa kwekupihwa kwakanyanya, chengetedza iyo system inogara ichidaro, zvakare nekuitika kwekudzvinyirira kupinda, kubatsira kuchengetedza mvura nekudzivirira kuyerera kwayo kwakawanda, kubvisa njodzi yemvura nyundo uye kuderedza ruzha uye ruzha runogadzirwa panguva yekushanda kwegadziriro yemvura.
Kudzvinyirira mvura kudzvanywa kunoisirwa kumashure mita yemvura i Firita yemvura patambo huru yesimba. Zvinogona zvakare kuiswa munzvimbo munzvimbo dzemapaipi ehevhuta uye matangi, asi ichi chigadziriso chinoshandiswa chete kana kuwanikwa kwakabatana kukuru hakugoneki.
Iyo yakaiswa isati yasvika uye mushure meyemutemo kuvhara mavharuvhu, ichigonesa kuiswa kwayo uye nekugadziriswa kunotevera. Chishandiso chakaiswa zvakamira.
Onawo: Magetsi electrolysis
Iyo yekudzvinyirira yemvura yekudzikisa inogona kuiswa munzvimbo dzakasiyana dzesisitimu yemvura:
musangano mukuru - mushure memamita emvura, main vhara uye kuchutera patambo huru yesimba. Munguva yekuisa, rangarira nezve inoyerera kudzikamisa chikamu kuseri kwodhijita uye nezve kuisa iyo yekumira mushure mekutiza kuisirwa Kuisa hwaro hwekumanikidza kwehurongwa hwese hunochengetedza mvura.
zone musangano - pamitsara yekugovera yemvura yakavharwa hita uye matangi ekuchengetedza, apo iyo chinangwa chekuisa iyo mvura inodzvinyirira kudzora ndeye kudzivirira kuvhura vharuvhu yekuchengetedza kuitika kwezvinhu mukuchinja kunoitika mukudzvinyirira kushanda. Izvi zvinobvumidza kuwanda kwe heater activation kuderedzwa.
kukanganiswa - chete munzvimbo yekumisikidza yekuboiler uye nekushandisa pamwe chete kwemisoro ine thermostats. Izvo zvinoshamisa zvekumanikidza zambuko zvinogona kuoneka pano, izvo zvinokonzeresa kuvharwa kwevhavha yekuchengetedza. Mune ino kesi, kumanikidza vanodzora vanofanirwa kugadzirisa kuyerera kwemvura inopisa uye inotonhora.
- muzvirongwa zvekupai.e. yakakwira-kukwira zvivakwa, kuburikidza nedzvinyiriro nyowani masisitimu, panowedzerwa nzvimbo dzekumanikidza. Kudzvinyirira mvura kuderedza mvura kunoshandiswa kana iyo yekuzorora kudzvanywa muhurongwa ichidarika 5 bar kana iyo yekuzorora inomanikidza kumusoro kwevharo yekuchengetedza (i.e. heater yemvura) inodarika 80% yekuvhurwa kwayo kwekuvhura.
Iko kudzvanyirirwa kwemvura mumapaipi kunofanirwa kuve kunogadziriswa kune kugona kwemidziyo uye masisitimu akaiswa mukuiswa kwemvura. Kudzvanywa kwemvura kwakanyanya inogona kukonzera kukuvara kana kusashanda kwemaitiro, saka mvura inoderedza mvura inoisirwa musisitimu yemvura.
Chinhu chinoshanda cheyemwe kudzoka chakakosha membrane ane mhosva yemaitiro ekudzvinyirira emvura anoshanda mugadziriro yemvura.
Kana yakasimba kwazvo rwizi rwemvura runoita membrane mune reductor, chitubu chinosimudzwa, chinowedzera chisimbiso uye chinoita kuti mvura inodikanwa iwanikwe. Kana dzvinyiriro ichidonha pazasi peyero yakatarwa, tsime rinodonha, zvichibvumira mvura kuyerera.
Kune akasiyana, uye kazhinji akaoma, mhinduro dzinoshandiswa mumusika asi nekuwongorora rkumanikidzwa kwemvura eductor musimboti wekushandisa imwe neimwe isingachinjiki: iyo diaphragm, chisimbiso uye vheji inoshanda pamwe chete kuti dzvinyiriro ibudirire.
Kazhinji, kutenga kweanodzvinyirira mvura kuderedza kunova chinhu chakakosha, nekuti kushandiswa kwayo kunochengetedza iwo mvura mvura kubva kutadza kunokonzerwa nekumanikidza kwakanyanya uye inzira yekuderedza kurasikirwa kwemvura muhurongwa.
Onawo: Mvura inonatsa
Iyo yekumanikidza mvura yekudzikisa inoshandiswa kana:
system yekumanikidza kudzvinyirira inodarika kukosha inotenderwa
kudzvinyirirwa kumusoro kwevheji yekuchengetedza kunodarika 80% yevharumu yekuvhura vheji
nguva nenguva kushandisa chirimwa kunogona kuisa njodzi yekuwedzeredza kwenguva pfupi
kudzvinyirira kumanikidza pakuiswa kunodarika 5 bar
Kudzvinyirira mvura kudzvanyirira zvinodikanwa uko kune iripo network kudzvinyirira (Mvura) yakakwira zvakanyanya kumuti kana michina kana kuti inochinja-chinja nguva nenguva.
Onawo: Reverse osmosis
Paunenge uchitengesa iwe unogona kuwana michina yezvakasiyana zvigadzirwa uye yakagadzirwa nezvinhu zvakasiyana:
Cartridge (cartridge) inotapudza ine muviri wendarira une zvinongedzo uye imwe-chidimbu cartridge ine mesh dhizaini uye chisimbiso. Iyi dhizaini inobvumidza kuti kuisirwa kubviswe neshaye inodzivirira yekuchenesa. Iyo yose mvura yekudzvinyirira mashini maitiro ari mukati me cartridge, saka kuchengetedza hakuchinje mamiriro ekumanikidza.
stainless simbi anoderedza iwo anodzivirira zvishoma pamaitiro ekuora pane kupfuura yendarira. Dzokupedzisira dzinodhura, asi dzinoita zvirinani nekushandisa kwakakwirira kwemvura.
1 inch mvura yekumanikidza inodzora, ¾ inoderedza kana 1/2 yemvura yekudzora inodzora inosarudzwa zvichienderana nehupamhi hwepombi yekugovera. Iko kusimba kwezvikamu zvidiki zvinoderedzwa zvakaenzana neiyo yakakura, uye yakanyatsosarudzwa ivo vanozogara kusvika makore akati wandei.
kudzvinyirirwa kwemvura kudzvinyirira nefirita ndiyo mhinduro yakanaka kwazvo mukuisa pasina mamwe mafirita. Imwe neimwe filamu inoshandiswa Izvo zvakakosha kuti kuchenesa nguva dzose kuitwe neyekutsikisa mesh akaisirwa kumusoro kweanodzvinyirira emvura anoderedza.
kudzvinyirirwa kwemvura kuderedzera neinetso cheji yakavakirwa-mukati kana kwekunze inoita kuti zvive nyore kushandisa uye inowedzera kuve nyore kwekushandisa iyo mvura system, ichipa nekuverenga nekukurumidza kwekumanikidzwa chaiko muiyo mvura system.
kudzvinyirirwa kwemvura kuderedzwa nefirita uye kudzvinyirira gauge mhinduro yakazara uye iri nyore kushandisa.
Cheaper mhando dzevatongi vane fekitori preset kudzvinyirira. Kana ukasarudza iyo inodhura kwazvo yekumanikidza mvura kuderedza, unokwanisa kugadzirisa nekuchinja magadzirirwo emagetsi pachishandiswa.
Onawo: Anonwa doro
4.8 / 5 ( 28 mavhoti )
castorama yemvura inodzvinyiriramaitiro ekudzvinyirira emvura anoshandamaitiro ekuchenesa mvura inoderedza mvura inotapudzamaitiro ekugadzirisa iyo inomanikidza mvura kuderedzanzira yekuisa sei mvura inoderedza simbachii chinomanikidza mvura kuderedzakumanikidzwa kuderedza mvurakudzvinyirirwa kwemvura kuderedzakudzvinyirirwa kwemvura kuderedza 1 inch1/2 mvura inodzvinyirira inotapudza1/2 intshi mvura inodzvinyirira2 inch yemvura inodzvinyirira3/4 mvura inodzvinyirira inotapudza3/4 mvura inodzvinyirira inotapudza nedzvinyiriro yegejicastorama yemvura inodzvinyirirakudzvinyirirwa kwemvura kuderedza mutengokuchenesa mvura inoderedza mvurakudiridza mvura kumanikidza mvura kuderedzakudzvinyirirwa kwemvura kuderedza herzkudzvinyirirwa kwemvura kuderedza herz kuongororahoneywell mvura inodzvinyirirahoneywell mvura inodzvinyirira manualmvura inodzvinyirira kudzideredza bhuku rekurairamashandiro emvura anoderedza anoshandadzvinyiriro yemvura inotapudza maitiro ekugadzirisadzvinyiriro yemvura inotapudza nzira yekuisaleroy merlin mvura inodzvinyiriradzvinyiriro yemvura inogadzirisa obikudzvinyirirwa kwemvura kuderedzwakudzvinyirirwa kwemvura kudzvinyirira nefiritakudzvinyirirwa kwemvura kuderedzwa nefirita uye kudzvinyirira gaugekudzvinyirirwa kwemvura kuderedzera neinetso chejikumanikidzwa kwemvura inogadzirisa inoshanda